Imininingwane yepharamitha Igama lomkhiqizo: I-OEM Voltage: Amandla we-220V. Isisindo se-7.5kw: Iwaranti ka-2000kg: Isevisi yonyaka ngemuva kokuthengisa enikeziwe: Ukuxhaswa kwe-Intanethi Amaphuzu Okuthengisa Okuyinhloko: Okuzenzakalelayo kwe-Mask Material: Izindwangu ezingezona ezelukiweyo Amandla: 100-150PCS / MIN Servo motor. Taibang okuzenzakalelayo Grad ...
MOQ: Pieces1 izingcezu
Intengo: $ 21000 / ucezu
MOQ: Izingcezu ≥500
Intengo: $ 0.29 / ucezu
1.5ml ipulasitiki isikulufa cap Centrifuge Tubes V-phansi SCT150-C-TH-N
Idizayini ye-safelocker eyi-Optimum. i-resin esezingeni eliphakeme yezintombi, i-R & R GEB inqubo yokubuyisa engagciniwe, njll., izokusiza ukwengeza isampula yakho yokunikezwa. Amashubhu asobala afana nengilazi ayatholakala ngemibala eyisikhombisa ehlukile I-Unique O-ring idesign edidiyelwe iqinisekisa ukuvikeleka okungcono kwama-reagents akho.
Izici 10ul ezejwayelekile isihlungi tip FT0010 Product impahla: PP polypropylene; Umbala womkhiqizo: okusobala; Ibanga lokudweba: 0.5-10ul; Isikali sokulinganisa: 2ul, 10ul; Ukuqinisekiswa kwekhwalithi: umkhiqizo awunawo ama-DNA, ama-RNase nama-pyrogens; Isitifiketi sohlelo: ISO 9001/13485, ISO 14001, njll .; Izimakethe ezinkulu: ...
1.2ml96 Amapuleti Esikwele Ahlelekile I-Transparents Deep Well Plate DP12VS-9-N
1.3ml 96 Round Plates Well Plates V-Shaped DP13UR-9I-N
I-330ul 96 Round Plate Well Well DP33VR-9-N
I-350ul96 Deep Plated DP35UR-9-B
I-0.8ml Plate Well Well DP08VR-9I-N